5 shay oo aadan ka ogeyn kamaradaada amniga | Wararka Gadget
5 shay oo aadan ka ogeyn kamaradaada amniga
War gadget | 26/04/2021 10:53 | qalabka
Badbaadinta gurigaaga, ganacsigaaga ama xafiiskaaga waa muhiim. Tan awgeed, waxaa jira nidaamyo qaylo dhaan ah oo ay la socdaan kamaradaha ilaalada U oggolow in lagu hayo meelo kala duwan oo la ilaaliyo oo lagu ogaado waqtiga ku habboon soo galitaanka kuwa soo xadgudbay waqtiga dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, hubaal wali way jiraan waxyaabaha aadan ka ogayn kamaradaada amniga taasna waxay u rogtay aalad wax lagu barto.
1 Kaamirooyinka loogu talagalay faa'iidada amniga
2 Waxyaabaha aadan ka ogeyn kamaradaada amniga
3 Faa'iidooyinka isticmaalka kamaradda ilaalada
Kaamirooyinka loogu talagalay faa'iidada amniga
Kaamirooyinka amniga ayaa u shaqeeya sida a xiran fiidiyowga wareegga ee ku xiran nidaamka ilaalinta, taas oo kaliya ay arkaan dadka leh awood marin. Shaqadeedu waa in la duubo dhacdooyinka waqtiga dhabta ah, laga qaado sawiro dhinacyo kala duwan iyo si toos ah u tabinta wixii dhaca xitaa inta u dhexeysa 360 °si milkiiluhu u haysto qalab taageero qiimo leh haddii ay dhacdo xatooyo.
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa hadda leh kaamirooyin ilaalin ah oo ku xiran aaladooda, marka lagu daro isticmaalka adeegyada dhexe sida kuwa ay bixiyaan Qalabka Movistar Prosegur, maadaama ay ogaadeen inay yihiin a gabal aasaasi ah si aad u ilaaliso gurigaaga ama meheraddaada markasta.
Dhinaca kale, shirkadaha sida Prosegur waxay kuu fidiyaan adeegyo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin waxaad dooran kartaa nooca kamaradaha ilaalada ee ku habboon baahiyahaagaHaddii aad u baahan tahay ogaanshaha dhaqdhaqaaqa qolalka waaweyn ama qolalka yaryar.
Waxyaabaha aadan ka ogeyn kamaradaada amniga
In kasta oo xaqiiqda ah in kaamirooyinka amniga ay maanta caan noqdeen oo loo isweydaarsado noocyada kala duwan ee dhismayaasha, Waxaa jira waxyaabo xiiso leh oo iyaga ku saabsan oo aadan weli ogaan karin, sida kuwa hoos ku xusan:
Sannadka dhexdiisa Kaamirooyinka amniga ee 1960 ayaa loo isticmaalay in lagu kormeero gantaal laga soo riday Jarmalka. Nidaamkeeda waxaa soo diyaariyay Walter Bruch, si loola socdo dhacdada iyada oo aan qatar la gelin nolosha shaqaalaheeda.
Daraasado la sameeyay 2014 ayaa lagu ogaaday in adduunka waxaa ka jiray ugu yaraan 245 milyan oo kaamirooyinka amniga ah, oo si buuxda u shaqeynayay.
Ma ogtahay in markasta oo aad isticmaasho ATM-ka lagaa ilaaliyo kaamiro? Xaqiiqdii, waxaa jira kiisas badan oo khiyaano ah oo lagu xalliyay mahadnaqa muuqaallada laga duubay aaladahaan.
Waxaa jira meelaha had iyo jeer la dhigo kaamirooyinka ilaalada ee duubista ku haysa 24 saacadood maalintii, sida ay tahay xarumaha dukaamaysiga, dukaamada waawayn, bangiyada, jidadka guud iyo jidadka waawayn ee magaalooyinka.
Kaamirooyinka amniga qaar ayaa shaqeeya koronto la’aan, tan awgeed waxaa la siiyaa baytari u oggolaanaya inay ku sii hayaan duubista waqti cayiman oo xadidan.
Waqtigan xaadirka ah, dadka badankood waxay leeyihiin taleefan gacmeed iyaga oo u oggolaanaya inay ku xiriiraan internetka, iyagoo tan ku heli kara sawirrada ay bixiyeen kaamiradooda ilaalada iyadoo loo marayo codsi ay bixiyeen bixiyahooda digniinta u fiirso waqtiga dhabta ah waxa ka dhacaya gudaha gurigaaga, meel kasta oo adduunka ah.
Faa'iidooyinka isticmaalka kamaradda ilaalada
Kaamirooyinka ilaalinta waa indhaha nidaamkaaga amniga, waxay awood u leeyihiin inay ku ogaadaan dhaqdhaqaaqyada dareemayaal istiraatiiji ah iyo ku dhawaaqa digniinta waqtiga ku habboon kaasoo ka diiwaangashan bartamaha sida Movistar Prosegur, kaasoo ogeysiin doona hay'adaha u dhigma muddo gaaban.
Si aad u ilaaliso gurigaaga ama ganacsigaaga ammaan, waxaad dooran kartaa nidaamka ilaalinta ugu fiican oo hubi inuu leeyahay kaamirooyin wax ku ool ah oo leh xadad ku filan oo caymis. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa baahiyahaaga gaarka ah, maadaama aad iyaga ku saleysan tahay waxaad hagi doontaa doorashada kamaraddaada amniga aad ku habboon tahay.
Tusaale ahaan, waxaad ka heli doontaa qaar leh baaxad ballaaran sida heerkulka, laakiin tayada fiidiyowga ma ahan mid aad u wanaagsan; halka kuwa caadiga ah ee leh caymis yar ayaa kuu oggolaanaya inaad si faahfaahsan u aqoonsato astaamaha ku soo xadgudbaha. Dhanka kale, markaad isticmaaleyso PTZ aragtidaada ballaadhinta maaddaama ay leedahay dhaqdhaqaaq, taas oo kuu sahlaysa inaad xakameyso aagag gaar ah.
Sidoo kale, waa inaad maanka ku haysaa taas Maaha wax la mid ah in la daboolo ilaalinta dabaqa, jajabka ama xafiiska marka loo eego warshadaha, markay dhacdo waxaad u baahan doontaa inaad doorato tirada kaamirooyinka lagama maarmaanka u ah dammaanad qaadka ballaarin ballaaran.
Guud ahaan, nidaamyada kamaradaha ilaalinta ee fiidiyaha ayaa laga heli karaa xirmooyinka alaarmiga sida kuwa ka socda Movistar Prosegur Alarmas, oo ay ku jiraan dhammaan qalabyada lagama maarmaanka u ah rakibidda nidaamkan amniga waxayna ku siinayaan xiriir joogto ah saldhiggaaga dhexe ee helitaanka. , ilaalinta gurigaaga ama ganacsigaaga 24 saacadood maalintii, 365 maalmood sanadkii.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » 5 shay oo aadan ka ogeyn kamaradaada amniga
LG Tone Free HBS-FN7: Joojinta buuqa firfircoon iyo waxyaabo kaloo badan
Huawei wuxuu dib u cusbooneysiinayaa laptop-kiisa MateBook D 15 oo leh qalab cusub oo Intel ah